စားသုံးသူအသင်းမှ Lidl မှရောင်းချသည့်စက်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်ပေးသံကိုကြားလိုက်ရသည်။ သူတို့အဆိုအရကျနော်တို့ဂျာမန်အမှတ်တံဆိပ်ကရောင်းချဒီစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြန်ယူဆောင်လာရပေမည် ကုန်စုံဆိုင်ကြီး.
ဖုန်စုပ်စက် à Lidl ၏ Silvercrest လက်သည်မီးစွဲလောင်နိုင်သည်
ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လကတည်းက Lidl ရောင်းချခဲ့သောထုတ်ကုန်နှင့်အတူစိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်, သန်း ၆၀ စားသုံးသူသူတို့ကသူတို့ကိုကျွေးမွေးနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည်ဤထုတ်ကုန်သည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဝယ်ယူထားသူအားလုံးကိုဆိုင်သို့ချက်ချင်းပြန်ပို့ရန်၎င်းကိုရယူရန်အယူခံဝင်သည်။ အခပေး.
၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်စားသုံးသူများအသင်းမှသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည် ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၇ ရက်မှစ၍ Lidl ၌ရောင်းချခဲ့သည့် Silvercrest လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်ဖြစ်သည်။ သူတို့အရ“ ဒီ Lidl vacuum cleaner နှင့်၎င်း၏ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အားသွင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုစဉ်အတွင်းမီးဖမ်း "။ ယင်း၏ရည်မှန်းချက်မှာငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းမရှိလျှင်ပင်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ခက်ခဲသောပြန်လည်လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
သတိပေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဤနေရာတွင်ဤလက္ခဏာများရှိသည် လေဟာနယ် Silvercrest အငြင်းပွားမှုများဖန်တီးသော:
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: SHAZ 22.2 D5 လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်
ဆောင်းပါးနံပါတ်: 339 791_1 910
စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း - ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၇ ရက်မှစ၍
ထို့ကြောင့်သင်ပြtheနာအတွက်စိုးရိမ်ပြီးသင်၏စက်ကိုပြန်ပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကအမှတ်တံဆိပ်အား0800 900 343 ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
အမှန်မှာ၊ ခဲယဉ်းသောလျှော့စျေးသမားများအဖို့ဤကဲ့သို့သောမတော်တဆမှုများနှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိတွေ့ရန်အလွန်အမင်းဖြစ်နေသည်။ သေချာပါတယ်, ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်း။ တကယ်တော့, ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သိမ်းဆည်း Lidl မှာအချိန်အတန်ကြာတိုးမြှင့်စတင်ပါပြီ။
ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လကကျွန်ုပ်တို့စကားပြောခဲ့ပါကစတိုးဆိုင်သည်ရတ်တူးဝါးဟင်းသီးဟင်းရွက်များပြန်ပို့သည် ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ပိုးသတ်ဆေးနှုန်းစံချိန်စံညွှန်းများထက်ပိုမိုမြင့်မား အခွင့်အာဏာ ထုတ်ကုန်များတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေပါ ၀ င်တယ်လို့သံသယရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုသုတ်ပါတယ်။
သို့သော်မကြာသေးမီက Lidl ပြန်ပြောသောကောက်နှံစားစရာများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထုတ်ကုန်ရှိနှမ်းမျိုးစေ့များသည်မြင့်မားသော Ethylene oxide ပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်။